Vamwe Vanoti Hapana Chekupemberera Makore Makumi Matatu Tasununguka
Kubvumbi 15, 2010
Zimbabwe ichange ichipemberera nemusi weSvondo kusvitsa makore makumi matatu nyika yawana kuzvitonga kuzere kubva muhutongi hwehudzvanyiriri. Mhemberero idzi dziri kutanga neChishanu manheru apo kuchange kuine bira muHarare.
NeMugovera kuchange kuine hurongwa hwemabiko evechidiki huchatungamirirwa nemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe. NeSvondo, veruzhinji vachange vachiona mutambo uri pakati peHighlanders neDynamos. Hazvisati zvazivikanwa kana mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vachabatana naVaMugabe pazuva guru rekupemberera kuzvitonga.
Iyi ndiyo nguva ichange vanhu vachitarisa ndima yavafamba kubva pavakarasa joki rehudzvanyiriri. Asika, veruzhinji vanochema nerekuti vakacheuka shure, vanongoona zvinhu zvatonyanya kuipa kubva pane zvazvaive munguva yehutongi hwevachena, sezvo vanhu vachiri kungodzvanyirirwa.
Kodzero dzevanhu dzinonzi dzichiri kungotyorwa, mamwe mapato ezvematongerwo enyika achiri kungombunyikidzwa, uye huchi hwenyika, uho hunove hwakaita kuti mwana wevhu atore gidi kuti akwanise kuhunomborawo, hunonzi huchiri kungonomborwa nevane minwe mirefu. Kunyange hazvo pava nehurumende yemushandira pamwe, hapana zvati zvoratidza shanduko.
Mukuzeya nyaya iyi, tine mumwe wevakarwa hondo yerusununguko, VaWilfred Mhanda, avo vaizivikanwa nezita rechimurenga rekuti Dzinashe Machingura, pamwe namuzvinafundo Gordon Chavhunduka.
Vaviri ava vaudza Studio 7 kuti hapana zvinoratidza kuti nyika yava nemakore makumi matatu yawana kuzvitonga kuzere, sezvo zvinhu zvinenge zvatonyanya kuomera vanhu pane zvazvaive nyika isati yasununguka.
Hurukuro naVaWilfred Mhanda pamwe naProfessor Gordon Chavhunduka